प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट छात्रा घाइते - Sankalpa Khabar
5. प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकताको खोजी
6. केपी ओली ‘जबज’ छोड्ने नेकपाका पहिलो नेता हुन्: अध्यक्ष प्रचण्ड
११ फाल्गुन ११:०४
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका–९ मटैनामा रहेको बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रद्यानाध्यापक खड्कसिंह विष्टको कुटाइबाट एक छात्रा घाइते भएकी छन् ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा मनिका नाथलाई प्रधानाध्यापक विष्टले सोमबार कुटपिट गरेका हुन् । कुटपिटबाट घाइते भएकी छात्रा नाथलाई उपचारका लागि महाकाली अस्पतालमा भर्ना गरिए पनि अवस्था जटिल भएका कारण थप उपचारका लागि कैलालीको धनगढीतर्फ लगिएको छ । छात्रा नाथको टाउकामा चोट लागेको छ ।
छात्राका बुवा पदम नाथले विद्यालय गएकी छोरीमाथि प्रधानाध्यापक विष्टले कुटपिट गरी घाइते बनाएको बताए । “छोरी विद्यालय गएकी थिइन्”, उनले भनिन्, “घर आउँदा बेहोस भइन् । अस्पताल ल्याएका छौँ, टाउकामा चोट लागेको छ ।” छात्रामाथि कुटपिट गर्ने प्रधानाध्यापक विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले छात्रामाथि कुटपिट गरेका प्रअलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
घटनाबारे विद्यार्थी सङ्घसङ्गठन, महिला अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कारवाहीको माग अघि सारेका छन् । अनेरास्ववियू कञ्चनपुरका नेता रमेश पन्तले घटना दुःखद् भएको भन्दै प्रअमाथि कारवाहीको माग गरे ।
महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्द, मीना भण्डारी र निर्मला भट्टसहितका अधिकारकर्मीले महिला, बालबालिकामाथि भइरहेका घटनाको भत्र्सना गर्दै दोषीउपर कारवाहीको माग गर्नुभएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्दै जाजरकोट
९ फाल्गुन १३:१४
१३ फाल्गुन १०:३६
१३ फाल्गुन १२:३४
११ फाल्गुन ११:२९
११ फाल्गुन ११:११
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिने भएपछि…
१० फाल्गुन १२:३८
पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी : राष्ट्रपतिद्वारा प्राणप्रतिष्ठा पूजा
१२ फाल्गुन १७:३०
नगरपालिकाले फेरिदिए खरका छाना, अब चुहिदैन पानी
९ फाल्गुन १३:५०
प्रतिनिधिसभा संसद् पुनःस्थाप भएकोमा खुशीयाली सभा : अब मुलुक…
१२ फाल्गुन १५:३८
१० फाल्गुन १५:०३